Lacag kale oo Bank-ga Dhexe ee Soomaaliya lagala baxay | Somaale.com
Lacag kale oo Bank-ga Dhexe ee Soomaaliya lagala baxay
Yusuf Garaad:Saxaafadda iyo Danta Qaranka Taleyda Saxaafadda Saxaafadda waxaan u soo jeediyay in ay ilaaliso xeerarka saxaafadda. In ay mar kastaba ahaato mid ay wararkeeda oo dhami ay sugan yihiin. In ay ahaato mid dhexdhexaad...
Fadliga Bisha barakaysan ee Ramadan Fadaaisha ay leedahay Bisha Ramadaan ma, aha wax lagu soo koobi karo qoraal ama dhowr maqaal, waxaa laga qoray kutub aad u waaweyn, hadabba waxaan isku dayeenaa in aan ka...
DHallin-Yarada yeey ka sugayaan inay xudduudaha dalkooda u ilaaliyaan?! –Qaybta 1aad DHallin-Yarada yeey ka sugayaan inay xudduudaha dalkooda u ilaaliyaan?! –Qaybta 1aad (Somaaliya Mar Kale DHiig Waa Loogu Wan Qali!!) Axmed-Yaasiin Max’ed Sooyaan Itoobiya walaalo ma nihin,...
Madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa si adag ula hadlay xukuumadda federaalka oo beryahan uusan xiriirkoodu fiicnayn. Arrintan ayaa timid ka dib markii laba sarkaal oo sida la sheegay ay xukuumadda federaalka u soo magacawday sirdoonka Jubbaland shalay laga hor istaagay inay gudaha u galaan magaalada Kismaayo,...
Is casilaad mise xil ka qaadis been abuura? Is casilaad mise xilka qaadis been abuur ah Qofku wuxuu XAQ u leeyahay in uu iska casili karo shaqada uu hayo balse waxaa ceeb ah in la sameyso warqad taariikhdeeda...
-Dr Mukhtaar Nuur Abuukar Garsooraha Maxkamadda Gobolka Banaadir oo maanta Wariyayaasha kula hadlay Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in lacag laga lunsaday lagana Musuqmaasuqay Laanta Bank-ga Dhexe Soomaaliya uu ku leeyahay Dekedda Weyn ee Muqdisho.
Sidoo kale Garsooraha Maxkamadda Gobolka Banaadir aya xusay in 204 kun oo dollar lagala baxay Bank-ga Dhexe ee Soomaaliya Laanta uu ku leeyahay Dekedda Magaalada Muqdisho.
Waxaana Xatooyadaas uu dusha uga tuuray Garsoore Dr Mukhtaar Nuur Abuukar Agaasimaha laantaasi Bank-ga dhexe ee Dekedda Cabdi Maxamed Abuukar kaas oo ay heyb ahan isku dhow yihiin Guddoomiye ku xigeenka Bank-ga Dhexe ee Soomaaliya Maryan Macallin taas oo uu sheegay in ay ka soo hor jeesatay in la soo xiro Agaasimaha lagu eedeeyay dhaca.
Dhawaan ayey ahayd markii Dhac baahsan lagula kacay Xarunta weyn ee Bank-ga Dhexe ee Soomaaliya oo lagala baxay lagacab ka badan Nus Malyuun Dollar.
Dhageeyso Daawo Sawiro Khudbadihii Caleemo Saarka Madaxweynaheena Soomaaliya 0
Afhayeenka Guddiga doorashada Cismaan Libaax Ibraahim "Maanta ayaa la qabanayaa araajida" 0
Mwai Kibaki.“Waxaan u taagan nahay nabadeynta iyo xal u helida gobolka geeska Africa